WhatsApp Yazivisa Pamutemo Kuvhurwa kweNew Status Feature | IPhone nhau
Kana chimwe chinhu chikashanda, iwe unofanirwa kuteedzera. Zvirinani izvo zvinoita kunge fungidziro yekuti iyo yese WhatsApp timu yevagadziri ine imwe nguva ikozvino. Nanhasi hapana ari kushamisika nazvo zvese zviri zviviri Facebook neWhatsApp vanozvipira kuita kuteedzera zvese zvavanofarira zvakanyanya nezve zvimwe zvinoshandiswa, ingave Twitter, Snapchat… Kutevera mutsoka dze Instagram ne Snapchat, Facebook's meseji application WhatsApp yangozivisa nezve kuvhurwa kweiyo Chimiro chimiro, chinhu chitsva chinobvumidza vashandisi kugovana mavhidhiyo, mapikicha, kana maGIF nezuva rekupera.
Ichi chiitiko chitsva, zvinoita zvakafanana nezvatinogona kuwana mu Instagram uye Snapchat Nhau, tinogona kugovana mamiriro edu neshamwari dzedu kwemaawa makumi maviri nemana anotevera. Nebasa iri, vashandisi vachakwanisa kushandisa kamera yekushandisa kuti vagovane mafoto nemavhidhiyo, ayo anozowedzerwa nema emojis, mifananidzo kana zvinyorwa. Iyi ficha nyowani inogona kugoverwa nevose vanobata panzvimbo pevamwe vangangosangana kana mapoka.
Kubudikidza neiyo nyowani mamiriro tebhu, vashandisi vanozokwanisa kuona zvese zvakagadziridzwa zvechimiro chemahukama avo avakagovana nawo mukushandisa mukuwedzera pakutendera. pindura muchivande kuvandudzwa. Dzose idzi dzidzo dzinozove dzichiwanikwa chete kwemaawa makumi maviri nemana, mushure meizvozvo dzinenge dzisisawanikwe kune vese.
Iyi ficha nyowani ichangoburitswa so haisati yavapo munyika zhinji, asi nekufamba kwemaawa inosvika kumatanho ese, saka kana tichigara tichishandisa WhatsApp tinofanirwa kuve nemoyo murefu. WhatsApp yatora mukana wegore rechisere kuburitswa kweWhatsApp kutanga chirongwa chitsva ichi, apo vese vashandisi vanogona kuratidza chimiro chavo nenzira inonakidza.
UPDATE: Basa racho ratovepo muSpain uye riri kupararira kuburikidza nedzimwe nyika nekukurumidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » WhatsApp inozivisa zviri pamutemo kuvhurwa kweiyo nyowani States chimiro